ko phyo, Author at Real Gaming
စစ်တွေမြို့အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ ပိုးသတ် ဆေးဖြန်းစက်တစ်လုံး လှူဒါန်း ပေးခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ
စစ်တွေမြို့အတွက် အရေးတကြီး လိုအပ်နေတဲ့ ပိုးသတ် ဆေးဖြန်းစက်တစ်လုံး လှူဒါန်း ပေးခဲ့တဲ့ ခန့်စည်သူ တစ် က မ္ဘာ လုံး စီး ပွား ရေး ကျပ် တည်း နေ တဲ့ အ ခု လို ကာ လ ကြီး မှာ ရှိ တဲ့ သူ တွေ က မရှိ တဲ့ သူ တွေ ကို ပြန် လည် ထောက် ပံ့ ကူ ညီ ရင်း ဒီ ကာ လ ဆိုး ကြီး ကို ဖြတ် …
ပြန်ရောက် နေတာ ( ၄ ) ရက်ခန့် ရှိနေပြီး Q မဝင်ထားကြောင်း သတင်း များ ထွက် ပေါ်လာ သဖြင့် စစ်တွေ မြို့ပြန်ပညာရေး ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး Quarantine ဝင် ရပြီ
ပြန်ရောက် နေတာ ( ၄ ) ရက်ခန့် ရှိနေပြီး Q မဝင်ထားကြောင်း သတင်း များ ထွက် ပေါ်လာ သဖြင့် စစ်တွေ မြို့ပြန်ပညာရေး ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီး Quarantine ဝင် ရပြီ မော် လ မြိုင် မြို့ သိမ် ကုန်း ရပ် ရှိ စစ် တွေ မြို့ ပြန် ပ ညာ ရေး ဝန် ထမ်း အ မျိုး သ မီး Quarantine ဝင် ရ ပြီး မော် လ မြိုင် သိမ် …
ဘုရားပန်းအိုး လဲတဲ့ခါ ပန်းအရိုးတံ ပုပ်တာ မဖြစ်ပဲ ပန်းကြာကြာ ခံအောင် ပြုလုပ်နည်း လျှို့ဝှက်ချက် ပန်းအိုးထိုးတဲ့ အခါ ပန်းတွေ ကြာကြာ ခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းများ ပန်းအိုး ထိုးတဲ့ အခါ ပန်းတွေကို ကြာကြာ ခံနေစေမယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ် ။ အလုပ် စားပွဲမှာ အလှ ပန်းအိုး ထိုးတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့် အိမ် ဧည့်ခန်းမှာ အလှဆင် တာမျိုးနဲ့ ဘုရားမှာ ပန်းအိုး ထိုးပြီး ပန်းကပ် ပူဇော်တဲ့အခါ ပန်းတွေ ခဏလေးနဲ့ ညှိုးနွမ်းခြောက်သွေ့ သွားတတ်လို့ စိတ်အနှောင့် အယှက် ဖြစ်ရပါတယ် ။ အခု ဖော်ပြပေးမယ့် …
လန်ဒန်မှာ အလုပ် လျှောက်တုန်းက အင်တာဗျူး အကြောင်းကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြောပြလာတဲ့ တင်ဇာမော်
လန်ဒန်မှာ အလုပ် လျှောက်တုန်းက အင်တာဗျူး အကြောင်းကို ဂုဏ်ယူစွာ ပြောပြလာတဲ့ တင်ဇာမော် အသံ ပါဝါ အားကောင်းကောင်းနဲ့ ပရိသတ် ပါးစပ်ဖျားမှာ ရေပန်းစားတဲ့ သီချင်း များစွာကို သီဆိုခဲ့သူ တင်ဇာမော် ကတော့ အချိန် တစ်ခုလောက် ပရိသတ် ရှေ့ကပျောက်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် ကမှ ဂီတ အလုပ်တွေ ပြန်လည် လုပ်ကိုင် လာသူပါ ။ ပင်ကိုယ် အရည်အချင်း အပြည့်နဲ့မို့ သီချင်းတွေ ပြန်လည် လုပ်ဖြစ်တဲ့အချိန် မှာလည်း “ဧည့်သည်””ပုထုဇဉ်”စတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့အတူ ပရိသတ် တစ်ခဲနက် အားပေးမှု ရရှိခဲ့ ပါသေးတယ် ။ သူ ပျောက်သွားတဲ့ နှစ်တွေမှာ …
လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခိတ တပည့်လေး မောင်ချစ်မင်းထက် ရဲ့ ကျေးဇူး သိတတ်တဲ့ စကားလေး ကြောင့် ဝမ်းသာ မျက်ရည်ကျ ခဲ့ရတဲ့ ဂျွန်လွင်
လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ် ရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခိတ တပည့်လေး မောင်ချစ်မင်းထက် ရဲ့ ကျေးဇူး သိတတ်တဲ့ စကားလေး ကြောင့် ဝမ်းသာ မျက်ရည်ကျ ခဲ့ရတဲ့ ဂျွန်လွင် ဂျွန်လွင် ကတော့ မော်ဒယ် လောကမှာ အထူး အောင်မြင်ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်သလို အနုပညာလောက မှာလည်း မသိသူ မရှိ လောက်အောင် အောင်မြင်သူ တစ်ဦးပါ ဂျွန်လွင် ဟာ ချို့တဲ့ဆင်းရဲ သူများကို အလှူ ဒါနတွေနဲ့ ထောက်ပံ့သူ လည်း ဖြစ်ပါတယ် ဂျွန်လွင်ဟာ မတော်တဆ မှုကြောင့် လက် ၃ ချောင်း ပြတ်သွားရပေမယ့် မိသားစုကို ပန်းရန် လုပ်ပြီး ထောက်ပံ့ပေး နေတဲ့ …
ကူးစက်မြန် သန္ဓေပြောင်းပိုး အထူးသတိထားကြဖို့
ကူးစက်မြန် သန္ဓေပြောင်းပိုး အထူးသတိထားကြဖို့ ကူးစက်မှု”ဆယ်ဆ”မြန်တဲ့ ကိုဗစ်ပိုးကို ပြည်တွင်းမှာတွေ့ရပြီဖြစ်လို့ အထူးသတိထားကြဖို့ သတိပေး ကူးစက်မှု အလွန်မြန်ဆန်တဲ့ ကိုဗစ် သန္ဓေပြောင်းပိုးကိုတွေ့လာရပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သတိ ထားဖို့ ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ပြည်ပက နေမြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာတဲ့ အတည်ပြုလူနာတွေမှာ ဒီပိုးကိုတွေ့ရ တဲ့အပြင် ရန်ကုန်အပါအဝင် ဒေသအများစုမှာ ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကို လိုက်နာဖို့အားနည်းတဲ့ အတွက် အခုလို ဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပ က ပြန်လာသူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ ဓာတ်ခွဲနမူနာ ငါးခုမှာ ကိုဗစ်ပိုးသန္ဓေပြောင်းကိုတွေ့ရပြီး ဒီပိုးကနေ ပြည်တွင်းမှာကူးစက်မှုဖြစ်ခဲ့ရင် ဒုတိယ လှိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိတာကိုသတိထားဖို့လိုတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီကိုဗစ်ပိုးသန္ဓေပြောင်း ဟာ …
သူ ကြော် ငြာ ခေါ် ရိုက် မှ ထ မင်း စား ရ မယ့် လူ တွေ မ ဟုတ် ဘူး ဆို တဲ့ စ ကား ကြောင့် စိတ် မကောင်း ဖြစ် နေ တဲ့ ဖြူ ဖြူ ထွေး
သူ ကြော် ငြာ ခေါ် ရိုက် မှ ထ မင်း စား ရ မယ့် လူ တွေ မ ဟုတ် ဘူး ဆို တဲ့ စ ကား ကြောင့် စိတ် မကောင်း ဖြစ် နေ တဲ့ ဖြူ ဖြူ ထွေး ဟာ သ ဗီ ဒီ ယို လေး တွေ က တစ် ဆင့် ပ ရိ သတ် ရင် ထဲ နေ ရာ ယူ လာ ခဲ့ သူ …
ပါမောက္ခချုပ် ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားတဲ့ “စိတ်ဆိုးရင် စကား မပြောနဲ့” ဘာဖြစ်လို့လဲ? စကားကောင်း မထွက် ဘူး.. ဒါဆို ဘယ်လိုပြော ရမလဲ? စကား အပြော အဆိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားက ဟောကြားပေး ထားတာ ရှိတယ် စကားပြောတဲ့ အခါမှာ ၁။ ပြောသင့်တဲ့ အချိန်မှာ ပြောမယ် မပြောသင့်တဲ့ အချိန်မှာ မပြောဘူး.. ၂။ မှန်တာကိုပဲ ပြောမယ်.. မမှန်တာ ကို မပြောဘူး ၃။ ပြောမယ် ဆိုရင် လည်း ကြင်ကြင်နာနာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ ပြောမယ်.. ၄။ ပြောတဲ့အခါမှာ အကျိုး ရှိတဲ့ စကားကို …
ကိုယ်ဝန် လွယ် ထားရ တယ် ဆိုပြီး သတင်း တင်သူကို ဒဲ့မေး လိုက် တဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း
ကိုယ်ဝန် လွယ် ထားရ တယ် ဆိုပြီး သတင်း တင်သူကို ဒဲ့မေး လိုက် တဲ့ မျိုးကိုကိုစန်း လိင် ပြောင်း ခွဲ စိတ် ထား တဲ့ မော် ဒယ် မျိုး ကို ကို စန်း ကို တော့ ပ ရိ သတ် တွေ အ တွက် အ ထူး တ လည် မိတ် ဆက် ပေး ဖို့ မ လို လောက် ဘူး ထင် ပါ တယ် မျိုး ကို ကို စန်း …
မီဒီယာ တွေကို အသိမပေးဘဲ အလှူလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် တောင်းပန်စကား ဆိုလာတဲ့ ခင်သဇင်
မီဒီယာ တွေကို အသိမပေးဘဲ အလှူလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် တောင်းပန်စကား ဆိုလာတဲ့ ခင်သဇင် မင်းသမီးချောလေး ခင်သဇင်ကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို ရရှိထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ၊မင်းသမီးတစ်လက်ပါ ။ သွယ်သွယ် လျလျနဲ့ လှပတဲ့ မင်းသမီးချောလေးကတော့ ရုပ်ရည်အလှသာမက စိတ်ဓာတ် အလှကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ယောက်ပါ ။ ခင်သဇင်ဟာ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလှူတန်းလေ့ ရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ ။ ခင်သဇင် ကတော့ လက်ရှိမှာ လူပြောများနေတဲ့ လူကြမ်းမင်းသား ဦးတင်မြင့်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းမယ် ဆိုပြီး ပြောကြား ထားတာဖြစ်ပြီး သွားရောက် လှူဒါန်းဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို “ကိုယ်တိုင်ကျ သွားရောက် လှူဒါန်းထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်လို့ မီဒီယာများ …